Ku habeynta LightDM xoogaa Debian | Laga soo bilaabo Linux
Ku habayn LightDM xoogaa Debian ah
Ka dib i rakib LightDM Waxaan ka yara helay shilinta inaan gacanta ku habeeyo, markaa waxaan bilaabay inaan baaro sida loo sameeyo.
En Debian Waa wax aad u fudud, inkasta oo aynaan wax badan qaban doonin, ugu yaraan hadda waa ku filan tahay. Isbedelada oo dhan waxaa lagu sameyn doonaa feylka /etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf kaas oo aan ku fureyno gedit adoo isticmaalaya qunsulka.
Ama leh Alt + F2:
Hagaag, feylka sifiican ayaa looga faallooday, markaa wax badan kama sharixi doono. Halbeegyada la isku hagaajin karo waa kuwan:
Waana wax aad u fudud in la fahmo, sax? Hantida background Waxaan u sheegayaa inuu kaa qaado nambarka aan ku haysto faylka sawirkayga. Iyadoo magaca-mawduuca Waxaan dhigay dulucda gtk (taasi waa inay ku jirtaa / usr / wadaag / mawduucyo /) oo leh magaca farta font aan rabo inaan isticmaalo.
Marka laga hadlayo Ubuntu shayga ayaa kaliya lagu beddelay magaca feylka si loo qaabeeyo, taas oo kiiskan noqon lahaa:
Xitaa cunug wuu sameyn karaa 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Ku habayn LightDM xoogaa Debian ah
Si fudud. Mahadsanid. Iyo halkee ku taal GDM-da cajiibka ah ee Gnome 3? Sidee baa loogu rakibi lahaa Ubuntu oo lagu beddelayo LightDM?
Waa inaan isku dayaa, laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay wax fudud:
Ma jiraan wax shuruudo ah oo loogu talagalay sawirrada la gelinayo asalka? maxaa yeelay waxaan horeyba isugu dayay 2 mana dhigeyso iyaga: S
Jawaab Hector Zelaya
Sida loo abuuro saamaynta hooska desdelinux ee leh Gimp
Ku rakib LightDM Imtixaanka Debian